Linux Dhirairi - Unoziva Zvauri Kutenga? | Linux Vakapindwa muropa
Linux Dhirairi - Unoziva Zvauri Kutenga?
Chimwe chezvinhu chandinombochiva munhu anoshandisa Windows XP, hazvina basa kutenga purinda, scanner kana chero chinhu chinoda «mutyairi«. Muchokwadi, hapana anoenda mall kutenga kufunga, Iyo purinta ichandishandira muWindows XP yangu here? Kwete kwete, izvo zvinotorwa sezvisina basa. Inofanira kushanda.
Pandakachinjira kuLinux gore rapfuura ndakachinja kubva pabreak uye bang, kusiyana nevakawanda, ini ndaisada kunamatira neWindows UE (nekuti chimwe chezvikonzero chainditadzisa kubva paWindows ndechekuti ndaisada kuramba ndichishandisa kopi isiri pamutemo yechimwe chinhu) , Ini ndaive neprinta yakapusa, imwe yeaya maLexmark ayo anodhura kupfuura macartridge avanoshandisa. Iyo zvakare yaive yakapusa, yeTaiwanese "vakaipa vakomana" scanner, asi haina kumbondipa chero matambudziko.
Zuva randaida kudzokera kuhupenyu hwangu hwe "computational hupenyu", ndakamhanyira mudambudziko: Ini ndakanga ndisina kugadzirisira purinda yangu, saka ndakatanga kutarisa purinda bhokisi randakanga ndichinaro, Ndakawana bhuku racho uye pakanga pasina chinhu, kwete chiratidzo che yatinoti Linux. Ndakaedza kumisikidza nemamenyu eUbuntu, asi handina kuwana chero chinhu chakanaka. Ndakatarisa pane peji re Lexmark uye vaive ne mutyairi yeLinux yese! uye yanga isinga nyatsoenderana nechikwata changu. Kubva ipapo, Handina kuzomboishandisa zvakare.
Ndiine scanner yangu iyo nyaya yainakidza, asi pasina kusarudzika. MustekMugadziri wacho haana kutaurwa nezveLinux kana chero chinhu chakadai, asi nekuda kwechirongwa cheSANE (sezvo scanner yangu yanga yatove yechinyakare) ndakakwanisa kuwana iyo mutyairi yakagadzirwa nema linuxers ivo pachavo.
Para ti kuti iwe unoshandisa XP Zvinogona kutaridzika sechimwe chikonzero chekusashandisa Linux, asi ngatiendei kumashure kweiyi mamiriro:
Yokutanga ndiyo yekutanga: Linux musika wevashoma uye chero bedzi ichiripo 1 muzana, vagadziri havazoone macomputer edu asina Windows.
Izvo zviri pamusoro zvinotungamira kuitira kuti mushandisi weLinux asakwanise kushandisa zvinogadzirwa nemugadziri wehardware, saka zvinoitwa nevagadziri veLinux kugadzira madhiraivha avo (sevarume), iyo, kusvika pazvinobvira sezvo vagadziri mune idzi kesi vasingape chero rubatsiro.
Nezvose uye kunyangwe madhiraivhi akanyorwa nema programme anoshanda nesimba (uye pasina muripo), anowanzo netsa kuisa, dzimwe nguva kuedza kwemunhu kwaigumira pakukwanisa kushandisa mudziyo wavo paPC yavo, ndosaka vakagadzira mutyairi watisina kuzviita zvinoshanda kana isu tichafanirwa kugadzirisa.
Chii chaunofanira kuita kana iwe uchifanira kutenga purinda kana scanner kana chero yeiyo Linux PC yako?
Usavhunduke, ingo teerera kana iwe uchida kutenga chimwe chinhu chePC nekuti pane dzimwe nzira.
* Kana iwe uchida printa, nzvenga Lexmarkzvakanaka rutsigiro rwayo rwuri lousy paLinux kunyangwe zvingangoita kuti zvigadzirwa zvavo zvinopedzisira zvave kushanda (kwete kuti hazvipindirani asi iwe uri panjodzi).
* Usati watenga chinhu, tarisa nhamba yemuenzaniso uye Google iyo pamwechete neshoko rekuti "Linux" kana nezita re distro yako, semuenzaniso: Ubuntu kana Suse:
* Muchitoro: Paunoenda kuchitoro, tsvaga zvaunoda uye kana mutengesi auya unobvunza:
Izvi ****** zvinoenderana neLinux?
Kana mutengesi ari kukutarisa zvisinganzwisisike uye pasina mumwe munhu muchitoro anogona kukupa mhinduro inoenderana, enda kune chimwe chitoro kwavanoziva zvavari kutengesa. Nditende, varipo.
* The installation: Kana iwe uchiona zvichinetsa, tsvaga kana (kana pasina munhu akazviita) bvunza.
* Dzidziso: Iyo nyowani, zvakanyanya kuoma. Kana iwe ukatenga nhau dzichangoburwa dzegore zvinozonyanya kunetsa kuwana rutsigiro kunze kwekunge mugadziri akutsigira paLinux.
* Tarisa zvigadzirwa zvine zvikamu zveLinux pane avo mawebhusaiti: Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga pane zvaunoona, zano rakanaka ringave rekuisa muGoogle chiratidzo chechigadzirwa pamwe neshoko reLinux uye uone kana kambani iri kushanda yakanangana neLinux, izvo zvinogona kukubatsira kuchengetedza maawa basa risingakoshi:
Tarisa uone mutsauko uripo pakati pekutsvaga kweiri:
Tora mukana wekodzero dzako dzekutanga semutengi, kana uine kusahadzika, mutengesi haakwanise kuziva kuti ungavapindura sei (ibasa ravo), zvisinei, kutenga uye kushandisa chinhu chekushandisa kurishandisa neLinux hazvisi nyore asi zviri zviripo kana iwe ukaona mhedzisiro (seni ine yangu DCP-130C).
Wanga uchive uchitenga sei Linux Hardware?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Linux Dhirairi - Unoziva Zvauri Kutenga?
inoita 14 makore
Chinyorwa chikuru, chinangwa, chakanyanya kudhakwa, uye chinonakidza kwazvo. Kangani isu maLinuxers anomhanya mudambudziko remutyairi ...
Pindura kune elvenbyte
Chiitiko changu nevatyairi muGNU / Linux, kunyanya neUbuntu hachina kunetsa, nechisaruro chimwe chete, kadhi rangu revhidhiyo ine mwero ATI Radeon X300, iyo yaingondipa matambudziko kwemwedzi mitanhatu, ipapo ndinoburitsa kodhi yeATI uye munhu wese anofara, Kana zviri zvekusara, zvinondibata nharembozha, multifunctional, vhidhiyo makamera, emukati maPendrives (kutaura zvekunze) zvese zvakakwana, ini ndine mwero 6-gore-gore PC asi ine hupenyu hwakawanda hwasara, pamwe ndosaka iyo imwe yekusada kutenga ichangoburwa mukomputa, nekuti neyakagara yaratidza hardware Ubuntu inoshanda kwazvo.
Mune maonero angu ndoga ndinotenda kuti makambani kana asingafarire nyika yeGNU / Linux sekugadzira madhiraivha, vanogona kuita zvakafanana neAITI nekubatsira nharaunda nekusunungura maratidziro ekuti zvishandiso zvavo zvinoshanda sei uye nematauriro avanoita nePC Nenzira iyi, zvingave nyore kunyora mahara madhiraivha, hapana chavacharasa, kana ivo vanofunga kushandisa izvozvi zvese zviri kuitika neWindows Vista, kuti kune vatyairi vanovatengesa zvakasiyana? kubhadhara munhu wese mutyairi hahahahahhaha, iko kukwirira.
Uye sekutaura kwevapoteri, ruzhinji rwemaFree Software madhiraivha ayo anoshanda nemazvo akaiswa zvakapusa neapofu nevarume veLinux!
Iwe watora muenzaniso wakashata kutaura nezvevatyairi. Kazhinji, vangangoita zana muzana vemaprinta vanoshanda zvisina mhosva paLinux. Iwo matambudziko makuru anouya neiyo 100D kumhanyisa kwemamwe magirafu (kunyanya ATI) uye nemamwe mawebhusaiti. Asi kunyangwe izvi zviri kunyatso kugadziriswa zvizere. Ehe, nemakadhi eWi-Fi iwe uchiri kufanira kurwa zvakanyanya, asi ndivo vashoma futi.
Uye kudzivirira Linux zvishoma, ndine HP scanner iyo muWindows XP yaisandishandira (pakanga pasina madhiraivha) uye muLinux inoshanda zvakakwana kwandiri.
@McLarenX: Icho chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvishande, zvakati wandei kuti zviite kuti zvishande uye ndizvo zvandiri kutaura nezvazvo zvakanyanya. Vamwe vashandisi vasina ruzivo (seni vasingabvi kubva munyika yehurongwa kana vanonyanyisa vemakodhi) vanowana kuomarara patinofanira kutanga kutsvaga mutyairi wechigadzirwa chedu, chinonyanya kuitika ndechekuti
… Tinofanirwa kupfuura nemuchirongwa chakareba kuti chishande.
Ini ndinofunga kuti imwe nzira yakanaka ingangove iri munharaunda yenharaunda yese inoshandisa Linux kuscrato iwo mabrand anokwenya hupenyu hwedu. Nekuti ichokwadi kuti vazhinji vanoisa nzara huru kuti vaite izvozvo kutanga kutsvaga mhinduro dzeichi chigadzirwa kuti chimhanye paLinux. Asi chokwadi ndechekuti kana iyo imwechete kambani ikasadziya, iri kukuratidza kushayikwa kwekuremekedza. Kana, kune rumwe rutivi, kune nzvimbo imwe chete yekutarisa, uko mhando dzemhando dzezvinhu zvinoshanda pasi peLinux dzinokandwa kwauri, zvinoita sekunge vakawedzera kukosha. Ini ndinofunga zvingave zvakanaka. kunyanya kune avo vanozviuraya ivo pachavo vachiti kana paine panofanirwa kuve nekuenderana pakati pechigadzirwa chavanoburitsa uye linux iyo inogoverwa musika mugove (sezvavanotaura) inoshandisa. Ini ndinofunga izvo zvaizoita kanenge zvishoma kururamisira.
"Tine zvigadzirwa zvinoenderana neLinux"
Zvakanaka, chinhu chega chandakave nezvinetso nacho nemaccam. Iwo maprinta ese andakaedza zvakanyanya HP nekukurumidza kana iwe uchibatanidza iyo yatove kushanda.
Mapadiji emitambo akati wandei akandishandira, ini ndaisatombo fanirwa kuisa madhiraivha (inofanirwa kunge iri nekuti ivo vatouya mukernel), asi zviri nyore.
Pindura kune keogh
Bhuku rerima akadaro
Mumwe munhu anoziva uko kune anti-lexmark kufamba nekuti ini ndoda kunyorera kune izvo uye inguva yekuti ivo vape rutsigiro kune iyo penguin, kuve kambani yekudhinda ndiyo yakasarudzika chinhu.
Chingave chirongwa chakanaka kuita posvo kuunganidza masiginecha kumanikidza Lexmark kutsigira GNU / Linux mune ino posvo…. izano
Pindura kuRima bhuku
inoita 12 makore
Pakukwirira kwatinako mushure memakore ese aya linux nekuparadzirwa kwayo kwave nesu, zvingave zvakanaka kune mainjiniya ezvekusiyana kwakasiyana kujoina uye kugadzira chirongwa chakakodzera kuitira kuti kana mudziyo waonekwa, vatore sevha mutyairi angave ari uye woisa chishandiso nenzira kwayo ndinofunga kuti nekupa ruoko urwu kumonyanisa kugovera kwese uye nyika yelinux mune zvese isu tese tichabatsirwa. sezvo zviri nyore kuti isu tese tive nechimwe chinhu chatisingazive chekumisikidza nenzira kwayo ingave nhare, ipod, webcam, maprinta, ma scanner nezvimwe ... ndinofunga ndiyo ichava nzira chete yekubvisa zvese kamwechete . Ini ndinofunga kuti meseji iyi inofanirwa kunyorwa nemaforamu ese kuti meseji isvike kune anoenderana. Mazuva ese zvigadzirwa zvitsva zvinobuda uye zvine musoro kuti vanhuwo zvavo havasi kuita basa iri, saka isu tinofanirwa kukumbira avo vanogona kutibatsira kuisa nzira dzekubatsira iyi sisitimu inoshanda iyo yatowana nzvimbo munyika yekomputa uye inofanirwa kusvika kune mushandisi netsoka.
Kuteedzera Linux ... paWindows!
Hapana chakasununguka muhupenyu